Guddiga Gurmadka Abaaraha oo la kulmay Musharrax Farmaajo
Home / Guddiga Gurmadka Abaaraha oo la kulmay Musharrax Farmaajo
Xubno ka tirsan Guddiga Gurmadka Abaaraha heer qaran oo ka kooban wasiirro ka socda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, ganacsato, culumo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ayaa la kulmay musharrax Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ujeedada kulankan ayaa ahaa in la dardargeliyo hawlaha lacag uruurinta ee ay maalmahan guddigu ka wadeen magaalada Muqdisho iyo in musharrax farmaajo uu codkiisa ku biiriyo sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha xun ee ka jira guud ahaan gayiga Soomaaliyeed.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo xubin ka ah Guddiga Gurmadka Abaaraha ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ku mashquuleen doorasho halkii gurmad loogu fidin lahaa dadka ku xoola beelay abaaraha ee gaajada iyo harraadka la baaba’aya. Hadalkiisana waxaa ka mid ahaa “Mararka qaar waxaan is weydiiyaa haddii dadkii ay gaajo iyo oon u dhintaan yaa madax loo noqon doonaa. Wa arrin runtii naxdin leh. Damiirkii qofka Soomaaliga ah, waliba ragga masuuliyiinta ah ma garanayo sida uu wax ka yahay.”
Sheekh Nuur ayaa ku baraarujiyay dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan in ay is garabsadaan oo ay sadaqeystaan xoolaha Alle siiyay. “bani aadamka waa lacag jecelyahay balse waxaad ogataan in wax aad bixisaan badalkiisa Alle ayaa keenaya. Marka aad dooneyso inaad wax hesho waxbaa lala baxaa.”
“Aniga oo aanan kor u qaadin tiradii aad ku deeqday ayaa waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo waxa ay deeqdaasi tari karto. Deeqdaasi waxa ay dhalin kartaa in 6 kun oo qoys ay hal toddbaad si joogta ah biyo u helaan. Haddii si kale loo isticmaalo waxay dhalin kartaa in 500 oo qoys raashinkooda in muddo bil ah meel loo saaro. Waxaan rajeynayaa inta warkaaga maqlaysay iyo inta uu gaari doono in ay gartaan waajibaadka waqtigan oo kale ka saaran dadkooda.” Ayuu hadalkiisa kusoo afmeeray Wasiir Baafo.
Ugu dambeyntii Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahad celiyay guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha oo isu xilsaaray in ay waqtigan dhibka badan ay isu xilsaaraan hawshan adag, wuxuuna ka codsaday dadka Soomaaliyeed in ay xil iska saaraan.
Waxaana hadalkiisa ka mid ahaa “Waxaan baaq u dirayaa guud ahaan umadda Soomaaliyeed, gudaha iyo dibadda inta joogta, ganacsatada Soomaaliyeed iyo qof walba oo Alle wax siiyay in ay u gargaaraan dadka walaalahooda ah ee ay nasiib darrada ku dhacday, qof walbana waxa uu awoodo oo karaankiisa ah inuu ka geysto.”